Tag: fampiharana android | Martech Zone
Tag: fampiharana android
Zoma, Aprily 2, 2021 Zoma, Aprily 2, 2021 Douglas Karr
Miaraka amin'ny fampiharana 2.87 tapitrisa mahery hita ao amin'ny Android Play Store sy fampiharana 1.96 tapitrisa mahery hita ao amin'ny iOS App Store, tsy hanitatra izahay raha nilaza fa mihombo hatrany ny tsenan'ny fampiharana. Raha ny lojika, ny fampiharana anao dia tsy mifaninana amin'ny fampiharana hafa avy amin'ny mpifaninana aminao ao anaty akany iray ihany fa amin'ny fampiharana avy amin'ny faritra sy tsena marobe. Raha mieritreritra ianao dia mila singa roa handraisan'ny mpampiasa anao hitazona ny fampiharana anao - azy ireo
Alatsinainy, Novambra 16, 2020 Alatsinainy, Novambra 16, 2020 Douglas Karr
Misy porofo ampy tsara momba ny fomba nandraisan'ny apps finday finday finday avo lenta. Raha tsy zato dia misy farafaharatsiny fampiasa iray isaky ny tanjona. Ary na izany aza, ireo mpandraharaha mpisava lalana dia mbola manadihady làlana vaovao hidirany amin'ny lalao solution mobility. Ny fanontaniana apetraka kosa dia ny: - Firy sy mpandraharaha vaovao firy no afaka mividy ny fomba nentim-paharazana amin'ny fampandrosoana ny app? Tsy ny fandrosoana amin'ny fampiharana finday ihany no mandany vola sy mandany fotoana betsaka,
Talata, Oktobra 27, 2015 Talata, Oktobra 27, 2015 Douglas Karr
Malaza ho tsy manampy hetsika ao amin'ny CRM orinasa ny solo-barotra. Ny tahan'ny fampidirana hetsika dia mety ho ambany amin'ny 20%, ka mitarika amin'ny vinavinan'ny varotra natao miorina amin'io data io ho 80%. Ny LIID dia miatrika an'io olana io amin'ny rindrambaiko finday avo lenta izay manome fidirana data sy fitaovana mandeha ho azy mba hahamora ny fiainana toy ny fanaovana scanner momba ny karatra fandraharahana sy naoty an-tsoratra. Ny fampiharana finday LIID koa dia miasa amin'ny maha-mpanampy varotra virtoaly azy, mampatsiahy ny reps
Singa 10 ilaina amin'ny famokarana atiny mahomby
Alahady Oktobra 18, 2015 Talata, Desambra 15, 2020 Douglas Karr
Wrike dia sehatra fiaraha-miasa ampiasaina hanamorana ny famokarana atiny ao anatin'ny fikambanana misy anao. Izy ireo dia miantso an'io ho motera misy atiny ary mamaritra ny singa folo - na avy amin'ny fikambanana na avy amin'ny lampihazo - izay mahatonga ny famokarana atiny ho mandaitra kokoa. Inona no atao hoe motera atiny? Ny motera atiny dia ny olona, ​​ny fizotrany ary ny fitaovana izay manome atiny avo lenta, kendrena ary tsy miova amin'ny karazana haino aman-jery, ao anatin'izany ny atiny bilaogy, webinar, ebooks, infografika, horonan-tsary